Arsenal oo kalsooni ku qabta iney ku guuleysaneyso saxiixa Dani Ceballos & Hadii ay u dhaqaaqeyso Moise Kean. – Gool FM
(London) 22 Luulyo 2019. Kooxda Arsenal ayaa lagu soo warramayaa iney kalsooni ku qabto ku guuleysiga saxiixa xiddiga khadka dhexe Real Madrid Dani Ceballos, kaas oo ay rajeyneyso iney ku hesho qaab amaah ah.
Gunners ayaa si xoogan loola xiriirinayaa xiddiga heerka caalami, 22-jirkaan ayaana ka warqaba inuusan ku jirin qorshaha Zinedine Zidane ee fasal ciyaareedka bilaaban raba, sidaas darteed wuxuu qudhiisa doonayaa koox uu ka heli karo boos uu kusoo bandhigo awoodiisa.
Zidane wuxuu doonayaa in xiddigaan gabi ahaan la iibiyo, halka Perez uu fahamsan yahay inuu xiddigaan mustaqbal fog ku leeyahay Madrid, taasna ay dareensiineyo kaliya inuu xiddigaan kaliya ku fasaxo qaab amaah ah.
Mirror ayaa baahisay in Gunners ay kalsooni ku qabto saxiixa xiddigaan maadaama ay wadahadalo mirdhal ah la sameysay wakiilada Los Blancos, walow ay jiraan xiiso meel dheer ah oo ka imaanaya kooxda Tottenham Hotspur.
Ceballos waxaa la adeegsaday 34-ciyaarood fasalkii dhamaaday, sidaas darteed wuxuu doonayaa inuu door weyn ku yeesho garoomada kubadda cagta qaaradda yurub.
Dhinaca kale waxaa lagu soo warramayaa in Arsenal ay xiiseyneyso weeraryahanka da’da yar ee Juventus Moise Kean kaas oo aan la fileynin inuu fursad ka heli doono Maurizio Sarri.